Akụkọ - Gini bu usoro iji belata oriri electrode
Ka ọ dị ugbu a, usoro ndị iji belata oriri electrode bụ:
Ebuli ike ọkọnọ usoro kwa. Nweta ike ọkọnọ bụ isi ihe na - emetụta oriri electrode. Dịka ọmụmaatụ, maka ọkụ ọkụ 60t, mgbe voltaji n'akụkụ nke abụọ bụ 410V na nke ugbu a bụ 23kA, enwere ike iwelata ike elektrọndi n'ihu.
Mmiri-mma mejupụtara electrode na-ado.Water-mma mejupụtara electrode bụ ọhụrụ ụdị electrode mepụtara ná mba ọzọ na-adịbeghị anya. Igwe electrode nke mejupụtara mmiri nwere mmiri mejupụtara elu nke tube ígwè na-arụ ọrụ nke ọma na ngalaba na-arụ ọrụ nke obere eserese, na ngalaba nke mmiri na-eme ka ihe dị ka 1/3 nke ogologo nke electrode. Ebe ọ bụ na ọ dịghị ihe ọkụkụ na-ekpo ọkụ dị elu (graphite oxidation) na ngalaba nke mmiri na-eme ka mmiri dị mma, a na-ebelata electrode oxidation, na ngalaba nke igwe na-eme ka mmiri dị mma na-ejigide ezigbo kọntaktị na gripper. Ebe ọ bụ na eri nke ngalaba jụrụ mmiri na akụkụ nke graphite na-anabata ụdị mmiri dị mma, ọdịdị ya kwụsiri ike, na-enweghị mmebi, ma nwee ike iguzogide nnukwu torque, nke na-eme ka ike nke electrode dịkwuo mma, si otú a na-ebelata ikike oriri.
Anti-ọxịdashọn usoro mmiri ịgba graphite electrode na nakweere. Na echiche nke oriri nke electrodes na gbazee usoro, teknuzu jikoro nke graphite electrode mmiri spraying na ọxịdashọn na nakweere, ya bụ na-ekwu, mgbanaka mmiri spraying ngwaọrụ nakweere n'okpuru electrode griper ka ịgba mmiri na electrode elu, otú na mmiri na-agbadata elu electrode, a na-ejikwa ọkpọkọ mgbanaka na-afụ ikuku ikuku na nke dị ugbu a n'elu oghere electrode nke mkpuchi ọkụ, iji mee ka mmiri na-asọpụta. Iji usoro a, oriri nke ton steel electrode belatara doro anya. A na-ebu ụzọ tinye teknụzụ ọhụụ na ọkụ ọkụ ọkụ eletrik. Usoro ịgba mmiri electrode dị mfe, dị mfe ịrụ ọrụ ma dịkwa mma.
Electrode elu mkpuchi technology. Tekinoloji mkpuchi teknụzụ bụ usoro dị mfe ma dị irè iji belata oriri electrode.
Ihe a na-ejikarị eme ihe mkpuchi electrode bụ aluminom na ihe dị iche iche nke seramiiki, nke nwere nguzogide oxidation siri ike na nnukwu okpomọkụ ma nwee ike belata ihe oriri na-ekpo ọkụ na elu akụkụ electrode.
A na-eji ntinye electrode eme ihe. The itinye electrode bụ mikpuo electrode n'ime chemical gị n'ụlọnga na-eme ka elu nke electrode mmekọrịta gị n'ụlọnga ka mma na-eguzogide nke electrode na elu okpomọkụ ọxịdashọn. Ihe oriri nke electrode na-ebelata 10% ~ 15% ma e jiri ya tụnyere electrode.